Ebili mmiri nke Kelvin na - eme ka nzube nke mkpochapu Antarctica di ngwa Netwọk Mgbasa Ozi
Antarctica bụ otu n'ime ebe kachasị emetụta mmetụta nke mgbanwe ihu igwe. Thaw bụ otu n'ime nsogbu kachasị echegbu, ọ bụghị naanị n'ihi na ọ na-eyi ndụ nke ndị bi na kọntinenti egwu, kamakwa n'ihi na ịrị elu nke oke osimiri ga-enwe nsonaazụ maka ụwa niile.
Ugbu a, na mgbakwunye, ndị nyocha na ARC Center nke Ọkachamara maka Sayensị Sayensị Igwe hụrụ na Ifufe dị na East Antarctica nwere ike iwepụta mgbanwe n'oké osimiri nke ebugharị site na ebili mmiri Kelvin, nke bụ ụdị ebili mmiri nke oké osimiri.
Kelvin na ebili mmiri ka ha na-ezute ọdịdị ala mmiri nke ọwụwa anyanwụ Antarctic Peninsula, na-ebunye mmiri na-ekpo ọkụ n'elu nnukwu ice ndị dị n'akụkụ mmiri. Oge mmiri a na-eme na Antarctic dị nso na mpaghara mpaghara nke mpaghara ahụ, nke jikọtara ya na njem nke mmiri ọkụ n'elu ice, na-eme ka agbaze nke mpaghara ọdịda anyanwụ Antarctic gbazee.
Mgbanwe nke ikuku ndị dị n'ụsọ oké osimiri n'akụkụ a nke ụwa nwere ike ibute mgbanwe mgbanwe ihu igwe, ebe ọ bụ na Ka okpomoku zuru ụwa ọnụ na-ebili, ikuku ifufe ọdịda anyanwụ nke jikọtara ya na oke ifufe ndị dị na Southern Ocean na-ekpo ọkụ, na-eme ka mgbanwe ikuku dị nso Antarctica.
Mgbu ọkụ nke kọntinent ahụ bụ nsogbu na-enye nsogbu. Site na 2100, oke osimiri nwere ike ịrị elu karịa otu mita, na site na 2500, ihe karịrị mita 15 n’okpuru ngbanwe nke ugbu a nke ikuku gas. Ya mere, ndị na-eme nchọpụta kwenyere na a ga-emerịrị ihe ngwa ngwa iji gbochie okpomoku zuru ụwa ọnụ, n'ihi na ọ bụrụ na anyị mee nke a, »ụzọ ụzọ ndịda ndịda nwere ike ịlaghachi n'ọnọdụ ugwu ugwu, nke nwere ike belata agbaze na West Antarctica. Ọ ga-amachi ikpo ọkụ nke oké osimiri ma nye ohere iji dozie ụfọdụ nnukwu ice na-akwụsị n'oké osimiri.
Ịmatakwu ihe, pịa ebe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ebili mmiri Kelvin na - emezi ngwa ngwa nke Antarctica
Ezigbo ihe ọghọm nke Oké Ifufe nke Anyanwụ